Madaxweyne Xasan Sheekh oo walaac ka muujiyey hab dhaqanka ciidanka Kenya ee Kismaayo (Dhageyso) – idalenews.com
Madaxwaynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo Addis Ababa kula hadlayay Madaxda Midowga Africa ayaa walaac ka muujiyay ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo, ka dib markii ay diideen inay sugaan ammaanka xubno ka socday golaha xukuumadda ee Soomaaliya oo gaaray magaalada Kismaayo.
Xasan Sheekh wuxuu sheegay in uu Midowga Afrika kala hadlayo eedo loo jeediyay ciidanka Kenya ee ku sugan Kismaayo oo la sheegay inay diideen inay sugaan ammaanka wasiirro iyo xildhibaanno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Kismaayo.
Madaxweyne Xasan wuxuu sheegay in ciidanka Kenya ee qeybta ka ah AMISOM ay ku lug leeyihiin waxyaabo ka baxsan sharciyaddooda.
Wuxuu kaloo sheegay inay jirto koox ku sugan Kismaayo oo go’aamo u gaar ah fuliya, isagoo sheegay inuu xushmeynayo aragtidooda, balse wuxuu xusay in dalka ay ka jirto dowlad federal ah oo u xil saaran maamul u sameynta dalka.
“Annagu dhinacayga ma jirto wax cabasha ah oo aanu ka qabno Kenya, laakin qayb ka mid ah ciidamada xubinta ka ah AMISOM ayaa si khaldan u dhaqmay waxaanay hareer-mareen hawshii loo idmaday” ayu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlayay Madaxda Midowga Africa.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa maalintii labaad ku xayiran Garoonkeeda Wafti ka socday Dowladda Federaalka Soomaaliya oo doonayay inay halkaasi gaaraan, waxaan ishortaag ku sameeyay Maamulka Kismaayo oo kaashanaya Ciidamadda Midowga Afirica ee AMISOM.